लक्ष्मणप्रसाद गौतम Archives | साहित्यपोस्ट
१२ श्रावण २०७८ १८:०१ 0
मेरो यो पात्र यति सम्पन्न छ कि, के भन्ने ? जसको बयान गर्न मलाई कुनै वार्तिककार, भाष्यकार, टीकाकार वा शब्दकारसँग शब्द सापटी माग्नुपर्ला । त्यो पनि त्यस्तो शब्द जुन शब्द आलङ्कारिक होस्‌ । उपमामय होस्‌ ।मेरो यस पात्रको नाम ... ।…
२९ असार २०७८ २०:०१ 0
दुई चारजना अल्लारे ठिटाहरूसित पनि सङ्गत थियो देवेन्द्रको । सङ्गत यस अर्थमा थियो कि देवेन्द्र उनीहरूसँग कहिलेकाहीँ, कहिलेकाहीँ मात्र भेट्ने गर्थ्यो । देवेन्द्र अविवाहित ठिटो थियो र ती ठिटाहरूलाई पनि विवाहित भन्न त मिल्दैनथ्यो तैपनि…
राजेन्द्र पराजुली २२ असार २०७८ १७:०१ 0
ओरगानी । - अर्थात्‌ प्रचण्ड उसलाई 'ओरगानी' भनेर बोलाउँछ । र ऊ प्रचण्डलाई आन्तरिक गहिराइदेखि नै 'सदुवा' भन्न चाहन्छे । (...तर बाहिर:भन्न डराउँछे र बाबु' भन्छे।)- ओरगानी । अर्थात्‌ उसको वास्तविक नाम बिन्दु' हो।**** ओरगानी ! यो…
१५ असार २०७८ १८:०१ 0
यो बार छ र यावाहाङ्‌ छ। यो बार छैन भने यावाहाङ्‌ छैन । सिपाही यावाहाङ्‌ दिनभरि बन्दुक पड्काउँछ । सलाम छड्काउँछ । हुन्छ हजुर - भन्छ । जङ्गली काँढाले चिथ्राचिथ्रा पारेको पतलुङ्झैँ जिन्दगीलाई लतार्छ । हरेक दिन परेड सिध्याएपछि बन्दुक…
१ असार २०७८ १८:०१ 0
काठमाडौंको समाजमा चलेको कसै गरी अमेरिका जाने होडमा बगेर विद्यार्थीका रूपमा लोग्ने अमेरिका गएपछि एक्लिएकी छिन्‌ मन्दाकिनी सिंह । लोग्नेको त्यो प्रयासमा उनको सहमति त थियो नै, तर आफूले तत्काल भिसा नपाउने र त्यसको लागि अनिश्चित कालसम्म…
२५ जेष्ठ २०७८ १९:०१ 0
कोठा सानो छ। अँध्यारो हुनुपर्ने हो, तर ... झ्यालबाट घाम आइरहेको हुनाले उज्यालो छ अलिकति । चारवटा भित्ता छन्‌ । सेता छन्‌ । एउटा भित्तामा यस वर्षको क्यालेन्डर छ । अर्को भित्तामा गत वर्षको पनि छ।एउटा भित्तामा दराज छ किताबहरू…
१८ जेष्ठ २०७८ १९:०१ 0
सडकको पेटीमा ऊभिँदा प्वाँखजत्तिकै हलुङ्गो भएको थियो ऊ । उसको मनमा आफ्नो अस्तित्वको बिम्ब एकदमै टड्कारो र प्रखर भएको थियो । उसको दाहिने हात पाइन्टको दाहिने खल्तीमा घुसेको थियो र उसका पाँचवटा औँलाहरूले सत्तासीन अनुभूतिमा अश्लील…
११ जेष्ठ २०७८ १९:०१ 0
ध्यानाकर्षण गराउनझैँ कसैद्वारा म कुमतिर सुस्तरी छोइएँ । मुन्टो घुमाएर हेरेँ -देख्तै घीनलाग्दी एक युवतीले दुई हात जोडेर मलाई नमस्कार गरिरहेकी थिई ।अप्रत्याशित र अपरिचितखालको नमस्कारलाई प्रथमतः मैले नमस्कार फर्काइदिएँ । ऊ मुस्क्राई ।…
२८ बैशाख २०७८ १७:०१ 0
हामी अक्सर बिहान छ बजे उठेर पलङमा बस्थ्यौँ र पूर्वतर्फको झ्याल खोलेर डाँडापाखा नियाल्दै कुनै एक विषयमा विवाद गर्न थाल्थ्यौँ । कहिले ग्रह-नक्षत्रका कुरा, कहिले बाँस र चोयाका कुरा, कहिले लौका-फर्सीका कुरा तर कुरा पध्धु खालकै हुन्थे र…
१४ बैशाख २०७८ १८:०१ 0
लामो परदेशवासपछि भोलि घर फर्किने कुराले उसको मन त्यसै-त्यसै फुरुक्क भएको थियो । घर सम्झने बित्तिकै मनमा यति खुसी र रमाइलो उसलाई पहिले कहिल्यै लागेको थिएन । हुन त अघिअघिको भन्दा यसपालिको परदेश बसाइ निकै लामो भएको थियो। कामै त्यस्तो थियो…
डा. रेणुका सोलु १३ श्रावण २०७८ ०८:०१
मैयाँ : समाज र मानवीय चरित्रको ऐना
टीका सापकोटा १३ श्रावण २०७८ ०६:०१